Otu R & D - Shandong Better Motor Co., Ltd.
Banyere Ka Mma
Ulo oru & Ngwaahịa
Ngwa R & D
Motors Maka Igwe nhicha
Motors N'ihi Machine Woodworker & For Gardening Tool
Motors Maka Igwe Igwe
Motors For Automotive Ngwa
Motors Maka igwe ike ozo
Omume Ka Mma
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ aka ọrụ ọkachamara, ndị otu ahụ bụ ndị injinia nwere aha ndị isi na moto, igwe ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enwere ndị mmadụ 14 na otu R&D. 21 iche iche nke kpamkpam ọhụrụ ngwaahịa na-mepụtara kwa afọ, ọhụrụ e nlereanya bụ ihe 300 usoro.
Ọkachamara ọkachamara na teknụzụ
Prọfesọ Huang Daxu
Onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Science na Technology nke Huazhong na 1962, bụ isi na igwe eletriki
Onye nduzi na onye isi nchịkwa nke ụlọ ọrụ nyocha nke Xi'an Micro (ụlọ ọrụ nhazi nke ọnọdụ a bụ ọkwa nke ngalaba)
Ndị ngalaba steeti nwere onyinye enyemaka pụrụ iche
Director nke National Micro moto Quality Supervision na Testing Center, onyeisi oche nke National Technical Committee on Micro motor of Standardization Administration nke China, onyeisi oche nke National Technical Committee na Military Micro moto nke Standardization Administration nke China, Vice President of China Motor Industry Association, trostii nke China Electrotechnical ọha
Onye isi Injinia Li Weiqing
Gụsịrị akwụkwọ na Shandong Polytechnic University na 1989, isi na ọkụ injinia, bachelor degree, agadi engineer
Ndị nnọchi anya ndị mmadụ Longkou
Ọ na-arụ ọrụ na Jinlong Fada otu ụlọ ọrụ ebe 1989, bụ ọkachamara na ịmepụta na nyocha nke usoro moto, igwe ndọta na-adịgide adịgide, otu ụzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na igwe ojii.
Mgbe ọ sonyere BETTER, ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ na imewe na R&D nke usoro ihe eji arụ ọrụ, igwe ndọta na-adịgide adịgide, moto moto-phase. Ruo ugbu a, ọ karịala afọ iri. Ọ bụ usoro iwu siri ike na ahụmịhe bara uru nke imepụta moto
Ndị ọrụ R & D ndị ọzọ
Ha niile bụ ndị na-eto eto magburu onwe ha ọkachamara na igwe, moto, injinịa ma ọ bụ isi metụtara ya
N'ịdị uchu na ịnụ ọkụ n'obi na-aga n'ihu, na-akwado ngalaba ọ bụla ifịk ifịk
Ekwentị:+86 535 8612516